Computer Hardware Advanced - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Computer Hardware Advanced
Computer Hardware Advanced လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ပေမဲ့Advanced level တန်းကို ရေးသားဖို့ ဆိုတာ အများကြီးအတွေ့ အကြုံရော Theory ရော background knowledge နဲ့trouble shooting , maintainance and security တွေပါ ပါဝင်ပါတယ်..ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အဲလောက်ထိ အရာအားလုံး perfect မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. ဒါကြောင့်မိမိသိရှိထားတဲ့ နားလည်ထားတဲ့အတိုင်း ရေးသားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော် Topic အသစ်တစ်ခုဖွင့်တိုင်း Thread အသစ်သစ်တွေဆိုရင် web စာမျက်နှာ ဖောင်းပွသွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်... Computer Hardware Fundamental ထက်ပိုပြီးသိသင့်သိထိုက်တဲ့အပိုင်းကို ဒီ Computer Hardware Advanced အောက်မှာပဲ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဆွေးနွေးရင် ပိုသင့်တော်မယ်ဆိုပြီး ချန်ထားခဲ့တဲ့အပိုင်းကို ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါမှလည်း Hardware ရဲ့ အနှစ်သာရပိုပြီးပြည့်စုံမှာပါ.. ဆွေးနွေးပေးမည့်ခေါင်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်…
အခန်း(၁)ATA,IDE နဲ့EIDE အကြောင်း
အခန်း(၃)USB-Universal Serial Bus အကြောင်း
အခန်း(၄)ကွန်ပျူတာ Bus အကြောင်း
အခန်း(၆)Core i3,Core i5,Core i7 ကွာခြားချက်များ
အခန်း(၇)Basic Disk and Dynamic Disk
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 30-06-2011 at 02:15 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘဘကြီး, မျိုးဟန်ထက်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်စိန်ရွှေ, အောင်မင်းကို, အေကေတီ, ငြိမ်းချမ်း, ကြည်လင်သိန်း, aungkohtat, aungphyo, AZM, azp09, bagothar85, bonge, cystee, g00gle, KznT, minthike, phoopyaitsone, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Computer Hardware Advanced
ATA ဆိုတာ Advanced Technology Attachment ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်..သူက နည်းပညာ ရဲ့standard တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုမျိုး standard လဲဆိုတော့ hard disk နဲ့motherboard အကြား Data တွေကို သယ်ဆောင်ပေးဖို့ အတွက်ပြုလုပ် ထားတဲ့ ribbon cable ရဲ့standard ပေါ့..၂၀ ရာစု မှာပေါ်ခဲ့ကြတဲ့ hard disk တွေဟာ motherboard နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် data bus လမ်းကြောင်းကို IDE cable ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်.. စစချင်း ထုတ်တုန်းကတော့ hard disk နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ CDROM,DVD ROM , SCSI device တွေကိုပါ တွဲသုံးဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်..ATA packet interface အဖြစ်အသုံးပြုသောကြာင့် ATAPI လို့ လည်းခေါ်ပါတယ်..
IDE - Integrated Drive Electronics(ATA-1)
IDE ဆိုတာ Integrated Drive Electronic ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်..1994 ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်ပါတယ် ATA ထဲမှာတော့အစောဆုံး နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်..ATA-1 လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်..ATA-1 မှာအသုံးပြုတဲ့ transfer modeက PIO mode ဖြစ်ပြီး mode0နဲ့mode 1 ကို support လုပ်ပါတယ်.. တစ်စက္ကန့်မှာသယ်ဆောင် နိုင်တဲ့ transfer rate က 8Mbps(million bit per second) ဖြစ်ပါတယ်..
EIDE - Enhanced IDE(ATA-2)
1996 ခုနှစ်ကျတော့ Enhanced IDE ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ် EIDE Enhanced IDE ကို ATA-2 လို့ ခေါ်သလို fast ATA လို့ လည်းခေါ်ပါသေးတယ်..16Mbps ထိ transfer rate လုပ်နိုင် ပါတယ်..IDE မှာတုန်းက PIO mode နဲ့ run နေတာ mode0mode 1 သာ support လုပ်ပြီး EIDE မှာတော့ PIO mode3mode4ကို support လုပ်ပါတယ် PIO mode (Programable Input Output)က data တွေကို သယ်ဆောင်တဲ့ အခါ transfer rate လုပ်တဲ့ နည်းပညာ ဖြစ်ပါ တယ်..
1997 မှာ ATA-3 ကိုထုတ်ပါတယ် သူ့ မှာ ဘာပြောင်းလဲလာသလဲဆိုတော့ Improved Reliability , SMART နဲ့security feature တွေပါဝင်လာပါတယ်…
1988 မှာ ATA-4 ကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်…PIO mode အစား Ultra ATA/33 ကိုသုံးစွဲလာပါတယ်… Ultra DMA လို့ လည်းခေါ်ပါတယ်..33Mbps ထိ transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်..နောက်သူ့ ကို ATAPI4လို့ လည်းခေါ်ပါတယ်..
ATA-5 ကို 2000 ခုနှစ်မှာ ထုတ်လိုက်ပြီး၎င်းကို Ultra ATA/66 လို့ လဲခေါ်တယ် 66Mbps အထိ transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်..ယခင်က ribbon cable ကြိုးကို 40wire သုံးစွဲရာကနေ 80 wire သုံးစွဲလာပါတယ် ဒီလို 80 wire သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် crosstalk ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်..
2001 ခုနှစ်မှာ Ultra ATA-100 ထုတ်လုပ်ပြီး transfer speeds ကတော့ 100Mbps ထိုရလာပါတယ်..
2002 မှာ ATA-7 ကိုထုတ်ပါတယ် သူ့ ကို Ultra ATA-133 လို့ ခေါ်ပါတယ် data transfer speed က 133Mbps ထိရပါတယ်...ATA-7 ဟာ ATA-6 ကို backward compatable ဖြစ်ပါတယ်.. မကြာမှီမှာပဲ SATA ကို 2002 ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထုတ်လာတဲ့အတွက် ရှေ့ ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Ultra ATA-100 တို့Ultra ATA-133 တို့ ကို PATA လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်…ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ EIDE drive ကို IDE drive လို့ အလွယ် ခေါ်ကြသလို PATA Drive လို့ လည်းခေါ်ကြပါတယ်..
ဆွေးနွေးချက်အား pdf ဖိုင်ဖြင့်ယူလိုပါက ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 06:00 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘဘကြီး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, azp09, bonge, g00gle, minthike, yawnathan, zo
Serial Advanced Technology Attachment ဖြစ်ပါတယ်..နောက်ဆုံးပေါ် လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ် သူကလည်း ATA အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်..transfer rate မြန်ဆန်ခြင်း..wire ကို7Pin သာသုံးထားခြင်းကြောင့် air flow ကောင်းမွန်ခြင်း system unit အတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုကို ကင်းဝေးစေခြင်းတို့ အားသာပါတယ်…hard disk တစ်လုံးပဲချိတ်ဆက်လို့ ရတဲ့အတွက် point to point system ဖြစ်ပါတယ်…2002 နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ စပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်..စက်ကို shut down လုပ်စရာမလိုပဲ ဖြုတ်တပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်..hot swap ရတယ်ပေါ့ ဗျာ..SATA ကြိုးကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် connector ခေါင်း က L shape ပုံသဏ္ဍန် ရှိပါတယ်..SATA port ကို မှားထိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး..SATA ရဲ့ စနစ်မှာ jumper မလိုပါဘူး..SATA data transfer rate က သုံးမျိုးရှိပါတယ် …
SATA ll3Gbps
SATA lll6Gbps တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိစက်က Hard disk က SATA လား..SATA I လား SATA II လား SATA III လားဆိုတာ speccy software နဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်…
SATA နဲ့ PATA ဘာကွာလဲ
1.Point to point system ဖြစ်ပါတယ်..(ဒါကြောင့် Hard disk or CD ROM တစ်လုံးပဲတပ်လို့ ရပါတယ်)
2.Hot swap ရပါတယ်..ကွန်ပျူတာကို shut down လုပ်စရာမလိုဘူး..
3.Pin က7wire ပဲသုံးထားတယ်..
4.Air flow ကောင်းမွန်ပါတယ်..
5. Transfer rate သုံးမျိုး ရှိပါတယ်..(အထက်တွင်ဖော်ပြပြီး)
6.System unit အတွင်းကြိုးတွေရှုပ်ထွေးမှုမရှိပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်စေတယ်..
1.EIDE connector မှာ connector သုံးခုပါရှိတယ်..motherboard ကို connector တစ်ခုသွားပြီး ကျန်နဲ့master နဲ့slave မှာ drive နှစ်လုံးတပ်ဆင်နိုင်တယ်..
2.Hot swap မရဘူး..ကွန်ပျူတာကို စက်ပိတ်ပြီးမှ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်..
3.Pin က 40pin 80 wire သုံးထားတယ်…
4.40 pin 80 wire သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Airflow အားနည်းပါတယ်..
5.Transfer rate က အမြင့်ဆုံး 133Mbps ရှိပါတယ်
6.IDE cable ကြိုးပြားကြီးပါတယ်..
7.Master /slave ခွဲပေးရပါတယ်..
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 06:02 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘဘကြီး, လမ်းပြကြယ်, အိုက်ထွန်း, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, အောင်မင်းကို, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, AZM, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, minthumon, thureinsoe, winaingso, zo
I am expecting your next posts.
Please discuss next classes quickly..
ဆွေးနွေးချက်အား pdf ဖိုင်ဖြင့် ရယူလိုပါက ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 05:55 AM..
မျိုးဟန်ထက်, လမ်းပြကြယ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, AZM, azp09, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, minthumon, zo
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 06:04 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, ရှင်းသန့်, လမ်းပြကြယ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ကို, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, AZM, azp09, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, minthumon, putty, winaingso, yawnathan, zo
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုစံငြိမ်းခင်ဗျာ အ၇မ်းကြိုက်ပါတယ်။။အကိုနောက်ပို့စ်စောင့်မျှော်လျက်..အကိုရဲ့ အီးမေးကို ၇ှဲဦးလိုက်မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Find More Posts by foesoe
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 05:53 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, ရှင်းသန့်, ဇော်ရဲပိုင်, အေးဝတ်မှုန်, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, AZM, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, minthumon, PyaitSone, winaingso, yawnathan, zo
Nehalem ကိုပဲ base လုပ်ထားတဲ့ core i7 ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်..အဲတုန်းက စစချင်းထုတ်တုန်းက Bloomfield ကိုစထုတ်ခဲ့ပါတယ်..2009 ခုနှစ်မှာ Lynnfield,clarkfield,Arrandale တို့ ကိုထုတ်ပါတယ် 2010 ခုနှစ်မှာတော့ Gulftown ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်..ဒါတွေက Nehalem architecture ကိုအခြေခံထား တဲ့ မျိုးကွဲ code name နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ processor series တွေဖြစ်ပါတယ်..
အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထဲမှာ တစ်ခြားမျိုးကွဲတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်..core i series processor တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး ဘာကွာလဲလို့ မေးလာရင် တစ်ခုတည်းဖြေလို့ မရတော့ပါဘူး ဒါကြောင့်သူ့ မှာပါတဲ့အမျိုးအစား..အထဲမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ပါဝင်မှုတွေကို အထက်တွင်ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..Architecture တစ်ခုတည်းအောက်မှာ ပင်လျင် code name တွေခွဲပြီးတော့ထုတ်ထားတာကို တွေ့ မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..ညီအစ်ကို မောင်နှများအားလုံး knowledge ရကြပါစေခင်ဗျာ..
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 05:59 AM..
ရှင်းသန့်, နေမင်းမောင်, အေးဝတ်မှုန်, ကြည်လင်သိန်း, aungkohtat, AZM, azp09, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, minthumon, phoopyaitsone, PyaitSone, yawnathan, zaya007, zo
အကို ရေ pDF ဖိုင်အနေနဲ့ ရနိုင်မလား .... ရနိုင်မယ်ဆို တင်ပေးပါဦးနော်...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ oasislove အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခန်းတွေ အားလုံးပြီးရင် pdf file လုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, အောင်မင်းကို, ကြည်လင်သိန်း, AZM, bagothar85, blackNwhite, g00gle, minthumon, oasislove, thureinsoe
18-06-2011, 12:54 AM
Basic disk and Dynamic
Windows 2000 မပေါ်ခင်အချိန်ထိ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ hard disk ကို basic disk လို့ အခေါ်မရှိသေးပဲ ..windows 2000 ပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ volume အားလုံးကို manage လုပ်ဖို့hidden LDM database နည်းပညာကို သုံးလာပါတယ်…LDM ဆိုတာ logical Disk Management ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်..hard disk ကို span volume နဲ့database စနစ်ကို တည်ဆောက်တဲ့နည်းပညာပေါ်လာတဲ့အတွက် ၄င်းကို dynamic disk လို့ ခေါ်တွင်လိုက်ကြပါတယ် အဲတော့ သာမှန်သုံးနေတဲ့hard disk တွေကို basic disk ရယ်လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်.. Hard disk ကို ကွန်ပျူတာ windows မှာ Basic disk နဲ့ Dynamic disk ဆိုပြီး အသုံးပြုကြပါတယ်..များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ personal computer တွေမှာ အသုံးပြုကြတာတွေက Basic disk တွေဖြစ်ကြပါတယ်..Basic disk ကတော့အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့manage လုပ်ရလွယ်ကူပါတယ်..Advanced user နဲ့ IT professional သမားတွေကတော့ dynamic disk ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်…ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ hard disk လေးငါးလုံးလောက်ကို RAID လုပ်ပြီးသုံးတဲ့ အခါမှာ dynamic disk ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်..
Basic Disk ဆိုတာ ရိုးရိုးသာမှန် hard disk တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်..ဒီသာမှန် Basic disk ပေါ်မှာပဲ primary partitions,extended partitions နဲ့logical drives တွေဖန်တီး အသုံးပြုပါတယ်..Basic disk မှာ primary partition ကိုလေးပိုင်းအထိခွဲနိုင်ပါတယ်..ဒါမှမဟုတ် primary partition ကိုသုံးပိုင်းထားပြီး extended တစ်ပိုင်းခွဲနိုင်ပါတယ်…extended partition မှာမှ logical drive ကို ၂၄ ခုထပ်ခွဲနိုင်ပါသေးတယ်..(၂၄ ခုထဲမှာ drive letter A,B မပါဝင်ပေ-၄င်းသည် floppy drive letter အတွက် assigned လုပ်ထားခြင်းဖြစ်)
Windows 2000 လောက်ကစပြီး dynamic disk ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်..dynamic disk ဆိုတာ primary partition ,logical drive တွေမသုံးပါဘူး..Dynamic disk မှာ span volume တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်..fault tolerant volume တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်..ဒါတွေကို software RAID တွေနဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်..RAID technology ကို ဒီနေရာလေးမှာ ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်..dynamic volume တွေကို server နဲ့workstation တွေလိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးကြတာများပါတယ်..ဘာလို့ လဲဆိုတော့ hard disk အများကြီး ကို dynamic disk လုပ်ပြီးတော့သုံးခြင်းအားဖြင့် fail ဖြစ်သွားတဲ့ hard disk တွေအစား data တွေကို rebuilt ပြန်လုပ်နိုင်တယ်…Data တွေကို stipping သော်လည်းကောင်း mirroring ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ,RAID5သော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Basick to dynamic disk convert
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Basick disk ကနေ dynamic disk ကိုပြောင်းချင်ရင် disk management ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်သလို third pary software တွေနဲ့ လည်းလုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်..basic disk ကနေ dynamic disk ကို disk management ကနေပြောင်းမယ်ဆိုရင် start>Run>diskmgmt.msc ဟုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..disk management ကျလာတဲ့အခါ Disc0Basic ဒါမှမဟုတ် Disk 1 Basic စသဖြင့်တွေ့ ပါလိမ့်မယ် right click ထောက်ပြီး convert to dynamic disk ပေးလိုက်ပါ..basic disk မှ dynamic disk ကိုပြောင်းမှာ သေချာလားမေးပါလိမ့်မည်..yes ပေးလိုက်ပါ..ပြီးတာနဲ့dynamic disk ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်…
Dynamic disk to Basic disk convert
Windows ထဲကနေ dynamic disk ကနေ basic disk ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် volume အားလုံးကို ဖျက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် data တွေ loss ဖြစ်မှာပါ ဒါကြောင့် basic disk ကိုမပြောင်းခင်မှာ data တွေကို backup လုပ်ထားဖို့့လိုပါတယ်..(အဲဒါ very important ပါ) third pary software နဲ့ သုံးပြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ data မဆုံးရှုံးပဲ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်.
Basic disk နဲ့ Dynamic Disk တို့ ကွဲပြားသည့်အချက်များ
Basic Disks က partition အားလုံးကို manage လုပ်ဖို့ partition table ကိုသုံးတယ်..
Dynamic Disks က volume အားလုံးကို manage လုပ်ဖို့hidden LDM database ကို သုံးတယ်…
Support for each Windows
Basic Disk က operating system အားလုံးကို support လုပ်တယ်.. MSDOS, Win95/98/Me/NT/2000/XP/2003/ 2008/Vista/Windows 7.
Dynamic Disk က Win2000/XP/2003/2008/Vista and Windows 7, ကို support လုပ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ MSDOS, Win95/98/Me/NT and Windows XP Home Edition တွေမှာ support မလုပ်ပါဘူး..
Change capacity for partitions
Basic Disk တစ်ကြိမ် Partition ခွဲပြီးတိုင်းမှာ partition size ကိုထပ်ချဲ့ လို့ မရဘူး(Third party software ကိုမသုံးပဲနဲ့ ပေါ့လေ)
Dynamic Disk က ကွန်ပျူတာကို restart ချစရာမလိုပဲ volume ရဲ့size ကို ချဲ့ လို့ ရပါတယ်
Basic disks မှာ အမြင့်ဆုံး Partition ခွဲနိုင်တဲ့ capacity ကို limited လုပ်ထားပါတယ်..2TB အထိပဲ create လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Dynamic Disk မှာ 2TB နဲ့ အထက်ကြီးတဲ့ capacity တွေကို ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Basic Disk တွင် primary partition ကိုအများဆုံး ၄ ခုထိ ပိုင်းနိုင်ပါတယ် primary partition ကို သုံးပိုင်းထားပြီး extended partition ကို ထားရှိနိုင်တယ်..extended partition မှ logical drive တွေကို ဖန်တီးနိုင်တယ်..
Dynamic Disk မှာ partition တွေကို unlimited ဖန်တီးနိုင်တယ်..
Basic Disk တွင် primary,extended ,logical တွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..
Dynamic Disk တွင် simple volume, spanned volume, striped volume, mirrored volume နဲ့RAID-5 volume များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်…
Basic Disk တွေက အလွယ်တကူပဲ basic disk ကနေ dynamic ကို data တွေပျောက်ဆုံးမှုမရှိပဲ convert လုပ်လို့ ရပါတယ်..conversion လုပ်နေတုန်းမှာ Restart ချစရာမလိုအပ်ပေ..
Dynamic Disk တွေက dynamic disk ကနေ basic disk ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ အထဲမှာ ရှိတဲ့ volume တွေအားလုံးကို ဖျက်ရပါတယ် ဒါကြောင့် data တွေ lost ဖြစ်မှာပါ..(Third party software သုံးပြီးပြောင်းရင်တော့ data တွေ lost မဖြစ်စေပဲ ပြောင်းလို့ ရပါတယ်)
Basic Disk တွေက ဘယ် operating system မှာမဆို အလုပ်လုပ်ပါတယ်..
Dynamic Disk တွေက operating system အားလုံးမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး..
Basic Disk မှာရော Dynamic Disk မှာ တူညီသည့်အချက်များ
Basic Disk ရော Dynamic Disk မှာ FAT,FAT32 နဲ့NTFS file system တွေကို support လုပ်ပါတယ်..
Haveapartition table
Dynamic Disk မှာ partition table ကိုမသုံးဘူးလို့ ဆိုထားပေမဲ့ basic disk ရော dynamic ရောမှာ partition table တွေပါပါတယ် ဒါပေမဲ့ dynamic disk partition table က basic disk လို လိုမဟုတ်ဘူး..dynamic disk ရဲ့အဓိက main function က windows ထဲမှာ ရှိတဲ့Partition ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား partition တွေကို logically အရပေါင်းစပ် လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်..
Label and Drive Letter
Basic disk မှာရော Dynamic disk မှာပါ volume တွေ partitions တွေရဲ့ drive letter ကို မိမိ ကြိုက်သလိုသတ်မှတ်ထားနိုင်တယ်…
Basic disk မှာပဲဖြစ်ဖြစ် dynamic disk မှာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့Partition ဒါမှမဟုတ် volume က FAT/FAT32 ဖြစ်နေပါက command line ဖြင့် NTFS ပြောင်းလဲနိုင်သည်..အကယ်၍ C: partition သည် FAT32 ဖြစ်နေပါက NTFS သို့ ပြောင်းတဲ့ အခါ command line မှာ "convert C: /FS:NTFS" ဖြစ်ပါတယ်..
Last edited by ကိုစံငြိမ်း; 01-07-2011 at 05:41 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, ကြည်လင်သိန်း, aungkohtat, AZM, azp09, bagothar85, blackNwhite, g00gle, ko myo, minthike, minthumon, PyaitSone, yawnathan, zaya007, zo
oasislove ရေ..ဒီနေ့ ပဲ အခန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အောက်မှာ pdf ဖိုင်လေးတွေ ဒေါင်းလို့ ရအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ...အဆင်ပြေပါစေ..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကိုစံငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မောင်စိန်ရွှေ, AZM, bagothar85, g00gle, KznT
လင့်လေးပြန်စစ်ပေးပါဦး... ဘယ်နားကနေဒေါင်းရမှာလဲ..... ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်....
လင့်လေးပြန်စစ်ပေးပါဦး... ဘယ်နားကနေဒေါင်းရမှာလဲ..... ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်....
ဆွေးနွေးချက်အား pdf ဖိုင်ဖြင့်ယူလိုပါက ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်
ကို oasislove ခင်ဗျာ.. အဲဒီမှာ ဒီနေရာတွင် ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းရမှာလေ အစ်ကို.. ပိုစ့်တွေရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ အစ်ကိုစံငြိမ်း ပန်းရောင်လေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ထဲမှာလေ .. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
g00gle, minthumon, thureinsoe
ကျွန်တော်.ဆီမှာ ၀င်ကြည်.တာ up4vn မှာ တင်ထားတဲ. ဟာတွေ တခုမှ မရဘူး။
Unfortunately, the download link you have clicked is not available!! ပဲ တွေ.ရတယ်။
မောင်စိန်ရွှေ, bagothar85, thureinsoe
ဟုတ်တယ်... ကိုဂူဂဲပြောသလိုဖြစ်တာ... ဘာမှ မတွေ့ရဘူး....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ oasislove အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဦးသာကြီး, g00gle, thureinsoe
up4vn ကနေအဆင်မပြေသူအတွက် multiupload ကနေပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ..ဆွေးနွေးခဲ့သော အခန်းများအောက်တွင်ဒေါင်းရန်
အခန်း(၁)ATA,IDE နဲ့EIDE အကြောင်း(pdf file)
အခန်း(၂)SATA အကြောင်း(pdf file)
အခန်း(၃)USB-Universal Serial Bus အကြောင်း(pdf file)
အခန်း(၄)ကွန်ပျူတာ Bus အကြောင်း(pdf file)
အခန်း(၅)Computer connectors(pdf file)
အခန်း(၆)Core i3,Core i5,Core i7 ကွာခြားချက်များ(pdf file)
အခန်း(၇)Basic Disk and Dynamic Disk(pdf file)
Last edited by bonge; 03-08-2011 at 08:18 PM.. Reason: လင့်ဖြည့်
ဦးသာကြီး, နေမင်းမောင်, ကြည်လင်သိန်း, bagothar85, blackNwhite, boboaung30, bonge, g00gle, minthike, minthumon, oasislove
Originally Posted by ကိုစံငြိမ်း
အဆင်မပြေဘူးဗျာ တခြားနေရာကနေ တင်ပေးပါလား ifile တို့ Megashare တို့လိုမျိုး
Originally Posted by ညိုမင်းလူ
အစ်ကို ကိုစံငြိမ်းကိုယ်စား ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
နေမင်းမောင်, bonge, g00gle
( MM versions ) Computer ebooks collection KznT Applications 25 10-08-2011 10:53 AM